Ugaas Nuur Ugaas Rooble - Wikipedia
Ugaas Nuur Ugaas Rooble (dhashay qiyaastii 1835kii, dhintey qiyaastii 1898kii) wuxuu ahaa abwaan, gabayaa, halabuur, hogaamiye ciidan, taariikhyahan, filasoofar iyo Ugaaska beesha Gadabuursi wakhtiyadii 1848 ilaa 1898kii.
Sida dad badani isku raaceen, Ugaas Nuur wuxuu ku dhashay Gobolka Awdal. Sidoo kale, ugaaska isaga oo da’a yar ayaa waxa loo boqray ugaasnimada Qabiilka Gadabuursi, isaga oo ka soo jeeday qoyska Reer Ugaas ee beesha Makayl-Dheere.
Ugaaska ka sakow xilka loo igmadaye waxa uu ahaa qof shaqsiyadiisa ay ka mid tahay xilsaarid uu iska xilsaaray masuuliyada ka saaran dhulka iyo dadka uu masuulka ka yahay. Masuuliyada uu iska saaray iyo kalgacaylka uu u qabayna waxa inoo cadayhana gabaygii qaaliga ahaa ee “Kabaal nagi” oo aad badi ahaan garanaysaan. Siyaasiyan muu ahayn qof ku mashquulay arrimaha gudaha amase arrimahii ugaasyada iyo salaadiinta kale ee somaliyeed ay ku koobnayeen ee ahaa in uu ilaaliyo danaha beeshiisa kana ilaaliyo beelaha kale ee soomaliyeed. Laakiin Ugaas Nuur waxa uu ahaa qof dublumaasi ah oo gude iyo dibadba la leh xidhiidh masaalix iyo siyaasidina ka dhaxaysay. Taariikhyanada soomaaliyeed ayaa waxa ay ku sheegaan in uu yahay ugaaskii iyo abwaankii soomaaliyeed ee u horeeyay ee xidhiidh la yeesha isla markaana ka gabya guumaystaashi xiligaa dunida haystay.
↑ Taariikhtii Ugaas Nuur, Asalka Ugaaska, Qormo 1208* N.4.po
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ugaas_Nuur_Ugaas_Rooble&oldid=172499"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 02:12, 1 Jannaayo 2018.